Al-Shabaab oo markii ugu horreysay ka hadashay Saddexda Madaxweyne ee lagu doortay Kismaayo (Maxaa Cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo markii ugu horreysay ka hadashay Saddexda Madaxweyne ee lagu doortay...
Al-Shabaab oo markii ugu horreysay ka hadashay Saddexda Madaxweyne ee lagu doortay Kismaayo (Maxaa Cusub?)
Kismaayo (Halqaran.com) – Hoggaanka maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab, ayaa war ka soo saaray seddexdii Madaxweyne ee Khamiistii aynu soo dhaafnay lagu doortay magaaladda Kismaayo.
Isagoo Wareysi siinayay Idaacadda ku hadasha Afka maleeshiyaadka Shabaab ee Andalus, Sheekh Mohamed Abuu Cabdalla oo ah hoggaanka Al-Shabaab ee Jubbooyinka ayuu sheegay in ay dagaal lageli doonaan dhammaan kuwa sheegtay in ay madaxweynayaal ka yihiin maamulka isku magacaabay Jubbaland.
Abuu Cabdalla ayaa sheegay in kuwa sheeganaya madaxweynaha ay ka amar qaataan shisheeyaha, ayna joogaan labada degmo ee Afmadow iyo Kismaayo, cid kasta oo la doortana aysan jirin meel ay ku shaqeeyaan,.
Hoggaanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Jubbooyinka, ayaa xusay in aysan waxba iska beddelin mowqifkooda, ayna sii wadi doonaan dagaalka iyo qaraxyada ay ku hayaan maamulka Jubbaland.
Hoggaanka Al Shabaab